के कारणले गर्दा गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा पेट बदल्न सक्छ
मैले प्रतिलिपि गरें! प्रारम्भिक अवधिहरूमा गर्भावस्थामा पेट र पेटलाई चोट पुर्यायो - पेटको साथ कुनै समस्या छैन! त्यसो गर्नुहोस् -
<< p> क्रमबद्धको अर्को जन्म अवधिको लागि आफैंलाई तयार पार्न र शनिबारको लागि आफैलाई तयार पार्न। सामान्यतया, पेटको शीर्षमा र इसागस्ट्रिटको क्षेत्रमा। वास्तविकतामा हारमा हारमा, गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा पेटमा पीडा गर्भवती छ?
wageous र पेट दुख्छ। बोतमा शरीरको सामान्य कामको साथ पुन: उत्पादन गरिन्छ। प्रारम्भिक गर्भावस्थामा ग्यास्ट्रिक पीडा। गर्भावस्थाको पहिलो महिनामा एक महिला प्रायः विभिन्न स्थानीयकरणको स्पोश्डमोडिक दुखीकमा बस्छन, त्यसैले उनीहरूले खाद्यान्नको खानालाई इन्कार गर्छन्। यो स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ, चर्को, अन्य तीव्र पानीता टाउको दुख्ने समयमा गर्भवतीमा:
यदि गर्भावस्थाको बस्तीको कारणले पेटलाई चोट पुर्याउँछ वा तर त्यहाँ पेटमा पेटमा गर्भावस्थामा चोटपटक लाग्छ कि प्रारम्भिक समयमा गर्भावस्थाको बखत - उच्च छ, तपाईं थेरापिस्ट वा ग्यास्ट्रोएन्सेन्ट्रोलोजिस्ट सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। विशेषज्ञ, जब गर्भावस्थाको क्रममा पेट पेटको अभावबाट:
को पेटमा मोडेन घुमार्दछ:
ले लाट्भियन बेल्टबाट अनुवादित - जीवन, र गर्भवतीको लागि, यो सबैको जीवन हो, जुन भविष्यको बच्चा हो। एउटा सानो प्रभावलाई पनि एक महिलालाई चिन्तित पार्दै, उनीले भ्रुणलाई नोक्सान नगर्ने क्रममा पीडा र कुनै सम्भावित तरीकाको निर्धारण गर्न कोशिस गर्छिन्। प्राय: उत्साह सदाको लागि, पीडा र कटौती बढेको ग्यास गठनको संकेत हो, जुन केहि उत्पादनहरूको प्रयोगबाट हुन्छ। कसरी साधारण ब्लीटबाट खतरनाक पीडा छुट्याउन?
के गर्ने गर्भवती महिलाले पेट
सबैभन्दा सामान्य कारण यो पेट ट्विस्टहरू भ्रुणको विकासमा पत्याग हो। यो पीडा खतरनाक छ, यो रक्तशिष्टको लागि numpling छ। यदि पहिलो सहायता एक समयमै प्रदान गरिएको थियो भने, फल अझै बाँकी छ, र शरीरको काममा विचलन र ओछ्यानमा रेययूमा विचलनहरू स्पष्ट पार्दै।
त्यसोभए, यो प्लेसेन्टासँग छुट्याउन सकिन्छ, गर्भाशय भनेको रक्तचापबाट बढेकोले, पुरानो रोगहरु। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्, तर रोगबिलोजका लक्षणहरू सबै ठाउँमा उस्तै छ: पीडालाई उज्यालो रक्तसनीयता नबुझ्न नसकिने हुनेछ, र पेन्टकिलरहरूले तिनीहरूलाई हटाउने छैनन्।
यदि सर्वेक्षणले देखाए कि फलहरू सामान्यतया विकास हुँदैछ, यो चिन्ता गर्न आवश्यक पर्दैन: भविष्यको बच्चाको लागि त्यहाँ कुनै खतरा छैन। गर्भवती हुनाले उसको स्वास्थ्य श्रद्धेन, फूलेको, फूलेको र कोलोसिकमा सम्बन्धित छ - डाक्टरलाई मद्दतको लागि अपील गर्नुको कारण। भग्नावशेषले स्वास्थ्यशालाको पट्युलोजीसँग निदान पुष्टि गर्न दिनुहोस्, र परीक्षा अनावश्यक छ।
पेट दुख्ने रोकथाम
यदि गर्भवतको समयमा अक्सर पेटको तल हुन्छ भने, यी संभावनाहरू ठूलो र अनुचित जीवनशैलीको परिणाम हुन सक्छ। प्रत्येक महिलाको लागि यस्तो विशेष अवधिमा, शारीरिक "पुन: कन्फिगर" गर्न सजिलो हुन्छ, खराब बानी र उपयोगीको परिचयलाई उन्नत गर्न समय सजिलो हुन्छ।
गर्भावस्थामा महिलाको अवस्था अप्रत्याशित तरीकाले परिवर्तन हुन्छ। स्थितिका केटीहरूले धेरै असामान्य संवेदनाहरू अनुभव गर्न सक्दछन्, र प्राय जसो गर्भवती महिलाले पेटलाई चोट पुर्याउँछन्। नडराउनुहोस् र आतंक को लागी संकुचन नगर्नुहोस्, यसले भविष्यको आमा र बच्चाको राज्यलाई बढावा दिन्छ।
<< p> सम्झनको लागि यो सम्झना छ कि धेरै जसो केसहरूमा यस अवस्थाको शारीरिक प्रकृति छ र खतराको प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर कहिलेकाँही कहिलेकाँही पीडा गर्भावस्थामा रोगलोविज्ञान विकासको बारेमा चेतावनी दिन सक्छ, त्यसैले यती आमाले यो अप्रिय भावनाको सबै सूक्षकहरू जान्नुपर्दछ। र यो गर्भवती एक विशेषज्ञबाट यो अवस्था लुकाउनु हुँदैन किनभने यसले धेरै गम्भीर उल्लंघनको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ र बच्चा गुमाउने सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ।
पहिले, त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका पीडाहरू छन्, दोस्रो, गर्भावस्थाको हप्ता महत्त्वपूर्ण छ, जसमा केटीले यस सनसनीको सामना गरे। यस्ता गुनासोहरूको मामिलामा डाक्टरले यो कदर गरेको छ।
जब पेटको तल दुखाइ एक सुरक्षित लक्षण हो
शुरुवातदेखि नै बच्चाको शरीरमा बच्चाको गर्भधारणको पहिलो पटक अकल्पनीय परिवर्तनहरू धेरै बन्न सकिन्छ, जुन रोगजनक कुरा हुन सक्छ।
<< p> निरीक्षण पछि केवल एक विशेषज्ञले एक विशेषज्ञता निश्चित रूपमा भन्नुहोस् कि कारण हानिरहित छ। महिला पर्खनु हुँदैन र आशा गर्नु हुँदैन कि सबै कुरा आफैमा राखिएको छ। उल्लंघनको पहिलो संकेत पछि, तपाईं जटिलताहरूको एक समूहलाई उत्तेजित गर्न सक्नुहुनेछ, मेरो स्वास्थ्य मित्र र बच्चाको लागि असुरक्षित। तसर्थ, समस्यालाई बेवास्ता गर्नु र परिस्थितिलाई आलोचनात्मक रूपमा भन्नु भन्दा यो उत्तम हो।
गर्भावस्थाको विकासको रूपमा गर्भावस्थाको स in ्केतको रूपमा गर्भावस्थाको संकेतको रूपमा गर्भावस्थाको रूपमा गर्भावस्थाको रूपमा गर्भावस्थाको रूपमा।
बेबी उपकरण - प्रक्रिया पर्याप्त लामो र कुनै पनि महिलाको शरीरको लागि गाह्रो छ। र, दुर्भाग्यवस, सबैजना दु: ख र विभिन्न विचलन बिना यो पार गर्दैनन्। यदि एक गर्भवती महिला पेटको तल दुख्छ भने, तपाईले तुरुन्तै यस्तो उल्लंघनको उपस्थितिको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ:
<< p यी प्राय: विभिन्न र colors ्ग र स्थिरताका स्रावलाई वेवास्ता गरेर, यो एक वफादार चमत्ताको कारण हो जुन तपाईंलाई तुरुन्तै विशेषज्ञहरूलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता राज्यहरूले अपरिवर्तनीय परिणामहरू निम्त्याउन सक्छन्, त्यसैले ढिलो गर्न यो असम्भव छ, तुरून्त डाक्टरहरूको संवेदनशील नियन्त्रणमा समस्या हटाउन आवश्यक छ।
र तपाईंको टिप्पणी अनुसार, म क्यालाको हरियो रंगहरू बाहेक केही संयोगले मिल्दोजुल्दो छ, ऊ पहेलो हुन्छ, तर हाइपोन्ड्रयम र कोलको दुख्छ। सबैभन्दा सामान्य कारण गर्भावस्थाको बखत गर्नाले भ्रुणको विकासमाथोस्टित्व हो। यो पीडा खतरनाक छ, यो रक्तशिष्टको लागि numpling छ। अनुचित पोषणको कारण दुखाइ तानिरहेको छ, जुन अचानक आउँछ, बलियो टाउको दुखाइ र रक्तस्रावसँगै हुन्छ।
अक्सर गर्भाशय स्ट्रेट्स अप हुन्छ, मानौं आन्तरिक अंगहरूलाई समर्थन गर्न: glalebladd, Pancreas, कलेजो, कलेजो।
320 हप्ता र हार्ट (पेटको फेद) बिरामी भयो र यसको बिरामी भएपछि ऊ बिरामी भयो। यो सत्य हो, मेरो पखाला र पखाला।
प्रारम्भिक दुखाई उपस्थिति
यदि पहिलो त्रैमासिक पेटमा एक महिला झाडापखाला जस्तो पखाला जस्तै हुन्छ, पाचुरो विकार सम्भव छ। मध्यम दुखाइको अलावा, यस्तो अवस्थामा विनाशीवाद, पखाला, नर, बेकारको कारण उल्लियोअरी, पखाला म्यानटेरिज्म, नाइसाको स with ्केतहरू छन्। यी लक्षणहरूले आन्द्रास्थान, पेट, gallblawra, panalreas को कार्य संग समस्या को उपलब्धता संकेत गर्दछ। यो अनुचित पोषणको कारण कम-गुणस्तरीय पोषणको प्रयोग वा संक्रामक भक्त रोगहरूको विकासको कारण हो।
<< p> यदि गर्भावस्थामा पेटमा पेटमा के गर्नुपर्दछ यदि तपाईं पेट गर्भाववात गर्नुहुन्छ भने के गर्ने, के गर्ने यो त्यस्तो अप्रिय भावना सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? सर्वप्रथम, यो त्यस्ता सुविधाहरूमा मोटर गतिविधि र पोषणको रूपमा ध्यान दिन लायक छ। यी मुख्य कारकहरू हुन् जसले पाचन अंगहरूको काममा जटिलताहरू उक्साउन सक्छन्। तनाव कारकहरू द्वारा पनि हटाइनु हुँदैन, जसमा महिलाले केवल कमजोरी मात्र महसुस गरेन र पेटमा के हुन्छ तर कुनै पनि दिशामा कुर्सीमा परिवर्तन हुन्छ।
शारीरिक लोडको अभ्यास गर्भावस्थामा पनि यसको विपरित होइन। त्यहाँ एक तीव्रता, अवधि र प्रशिक्षणको चरित्र छ, तर तिनीहरूको उपस्थिति होइन। घरमा बस्न असम्भव छ र अपार्टमेन्ट छोड्न छैन, यदि त्यहाँ डाक्टरको सीधा गवाही छैन। त्यस्ता सूचकहरू प्लेसेन्टा, रक्तस्राव वा गर्भाशय हाइपेननसका जटिल प्रकारहरूको संरक्षणको कारण हुन सक्छ। अन्य केसहरूमा, यदि डाक्टरले लगातार सुत्ने मोडको बारेमा कुरा गर्दैन भने, हिंड्नको लागि यो असम्भव छ।
एक स्कान्डिन्सियन हिँड्नको रूपमा, विस्तृत चरण वा छिटो व्यायामले पाचन प्रणालीको सञ्चालनलाई सामान्य गर्न मद्दत गर्दछ, र अक्सिजन शारीरिक भारको समयमा रगतमा डुब्न मद्दत गर्दछ यो अधिक मा। प्रोबको लागि, तपाईं दिनको कुनै पनि समय छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, अवधि कम्तिमा minutes0 मिनेट हो, तर एक घण्टा भन्दा बढि होइन। सुत्ने बित्तिकै, त्यस्ता अभ्यासले सेरेब्रल अक्सिजन समर्थनलाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्दछ, शरीरको रक्त आपूर्ति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
उपयोगी र कुशलतापूर्वक गर्भावस्थाको कुनै पनि समयमा श्वासप्रश्वास जिम प्रयोग गर्नुहोस्। यसले पाचन प्रणालीको कामलाई सामान्यीकरण गर्न मद्दत गर्दछ, यसका साथै, उदाहरणका लागि योग, योगको लागि। यस्तो स्वागत लागू गर्न, निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्न लायक छ: